1. Thwala imaski ngexesha lonyaka lokugula okuphezulu komkhuhlane, ngeentsuku zesosi kunye nothuli, xa ugula okanye uye esibhedlele ukuze ufumane unyango. Ebusika, abantu abadala abane-immune immune ephantsi, abantu abagulayo bekungcono banxibe imask xa bengaphandle.
2. Uninzi lweemaski ezimibalabala zenziwe ngendwangu yechemicals, enomoya omncinci kunye nokukhuthaza imichiza, ekulula ukwenzakalisa indlela yokuphefumla. Iimaski ezifanelekileyo ziya zenziwe nge-gauze kunye nelaphu elingelilo.
3. Ayisosayensi ukungayibeki ecaleni emva kokuyisebenzisa kwaye uyihlambulule ngexesha. Emva kokugqoka imaski iiyure ezingama-4-6, uninzi lweentsholongwane luya kuqokelela kwaye imaski kufuneka ihlanjwe yonke imihla.
4. Unganxibi imaski yokubaleka, kuba imithambo yangaphandle yokufunwa kweoksijini inkulu kunesiqhelo, kwaye imaski inokukhokelela ekuphefumleni okungalunganga kunye nokunqongophala kweoksijini kwi-viscera, kwaye emva koko ivelise imiphumo emibi kakhulu.
5. Emva kokunxiba imask, umlomo, impumlo kwaye uninzi lwendawo engaphantsi kwendlela kufuneka igutyungelwe. Umda we-mask kufuneka usondele kubuso, kodwa akufuneki ichaphazele umgca wokubona.